11/21/15 ~ The Ahmadi Post : Myanmar
ISISသည်စစ်မှန်သောအစ္စလာမ်မဟုတ်သလိုမည်သည့်အခါတွင်မျှလည်း (စစ်မှန်သောအစ္စလာမ်) ဖြစ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်
November 21, 2015 S.M Osman No comments
အစ္စလာမ်သည်အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောသာသနာဖြစ်ကြောင်းယနေ့ခေတ်မီဒီယာများနှင့်လူမှုကွန်ယက်အသီးသီးတွင်နှစ်ဆယ့်လေးနာရီပတ်လုံး ရေပန်းစား ပျံ့နှံ့နေသောအတွေးအမြင်၊ အယူအဆဖြစ်ကြောင်း ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ် ၏ပရောဖက်ဆာဖြစ်သူ Mr. Amjad Mahmood Khan က ဖော်ပြသည်။
-ဤအကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များအကြောင်းကို ၂၀၀၁ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မွတ်စလင် မဟုတ်သောအစွန်းရောက်များက အပြစ်မဲ့မွတ်စလင်များအား နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်သတ်ဖြတ်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း ကမ္ဘာကသိသာမြင်သာစေသောခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်မွတ်စလင်များ၏အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကိုသာအသားပေးဖော်ပြထားကြောင်း မကြာသေးမီးကမှထွက်ရှိသောနယူယောက်တိုင်းမ်သတင်းစာတွင်ဖော်ပြပါရှိသည်။
-(Religion,Freedom and Peace)ဘာသာတရား၊ လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်ဖြင့်နယူးယောက်မြို့တွင် အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းကကြီးမှုးကျင်းပသောဖိုရမ်တွင်ပရောက်ဖက်ဆာခန်ကပြောကြားသည်မှာ-
-အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းသည်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်လျက်ရှိသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစ္စလာမ့်လှုပ်ရှားမှုအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ယင်းအဖွဲ့အစည်းကို ၁၈၈၉ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီး ယခုဆိုနိုင်ငံပေါင်း ၂၀၀ ကျော်တွင် အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း သန်း၂၀၀ကျော်ဖြင့် ဖြန့်ကြက်လျက်ရှိသည်။ယခုအဖွဲ့အစည်းကြီး၏ ဌာနချုပ်သည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင်တည်ရှိလျက်ရှိပြီး မည်သည့်ပုံစံ၊မည်သည့်အသွင်မျိုးဖြင့်မဆိုကျူးလွန်သောအကြမ်းဖက်လုပ်ရပ် ဟူသမျှကို ရှုတ်ချငြင်းပယ်သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ထို့အတူ အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းသည် ဗလီဝတ်ကျောင်းနှင့် လူနေထိုင်ရာနယ်မြေဒေသ အားသီးခြားစီခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကိုအားပေးသည့်တစ်ခုတည်းသောအစ္စလာမ့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
-လူသားတစ်ဦးချင်းအား လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပြုပိုင်ခွင့်ကိုအစ္စလာမ်သာသနာတွင် ထာဝရဘုရားသခင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကပေးထားပြီး တစ်စုံတစ်ဦးအား အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံစေဖို့မည်သူ့တွင်မှဖိအားပေးပိုင်ခွင့်မရှိဟုအစ္စလာမ်ကပြဌာန်းကြောင်း၊ ဖိအားပေးကာအဓမ္မစနစ်ဖြင့် ယုံကြည်ခိုင်းခြင်းသည် ယုံကြည်မှုမမည်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်ISISသည်စစ်မှန်သောအစ္စလာမ်မဟုတ်သလိုမည်သည့်အခါမျှလည်း စစ်မှန်သောအစ္စလာမ်ဖြစ်လာနိုင်စရာမရှိကြောင်းဖြင့် ၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် ဟားဗတ်ဥပဒေတက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရခဲ့ပြီး (Harvard Human Rights Law Journal) ဟားဗတ်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေဂျာနယ်၏ အယ်ဒီတာချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ပရောဖက်ဆာခန်ကဆိုသည်။
-ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအနက်ထွေပြားခြင်းမရှိသောစကားလုံးအသုံးအနှုံးဖြင့်ဖော်ပြသောကျမ်းများတွင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိကောင်းကင်ကျကျမ်းများအနက်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်တစ်ခုတည်းတွင်သာဖော်ပြထားကြောင်း ပရောဖက်ဆာခန် က ထပ်လောင်းပြောကြားသည်။အဓမ္မစနစ်ဆိုသည့်စကားလုံးမှာဘာသာတရား နှင့်မည်သို့မျှပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုမရှိကြောင်း၊ ယုံကြည်မှုဟူသည်တစ်ဦးချင်း နှင့်သာသက်ဆိုင်သောထူးခြားသည့်အနက်သဘောကိုသာဆောင်ကြောင်း၊ အဓမ္မစနစ်ကျင့်သုံးပြီး အခြားသူများအားဘာသာပြောင်းခိုင်းခြင်းကိုမွတ်စလင်များအတွက်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကပြင်းထန်စွာတားမြစ်ထားကြောင်း ပရောဖက်ဆာခန်ကဆိုသည်။
-အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကျူးလွန်ရန်သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ဟောပြောမှုများ၊ အမုန်း စကားများ(Hate Speech)၊ရန်စကားများ (Offensive Speech့)ပြောဆိုခြင်း သည်ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားမျှတရေးနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်အစရှိသည်တို့ကိုခြောက်လှန့်နေသောအရာများဖြစ်ပြီး ယင်းအားလုံးကိုအစ္စလာမ်ကတားမြစ်ထား သည်။အစ္စလာမ်ကပြဌာန်းသောပြောဟောမှုများ၊စကားများသည်လောကအတွက်ဆုတ်ယုတ်မှု၊ နစ်နာဆုံးရှုံးမှု တစ်စုံတစ်ရာမရှိချေ။
-မော်တော်ဆိုင်ကယ်များဖြင့်မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်သူ ၂၅ဝခန့်သည် Phoenix မြို့ရှိအကြီးဆုံးဗလီဝတ်ကျောင်းရှေ့တွင် စုရုံးကာကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဆန္ဒပြသူဆိုင်ကယ်သမား အများစုသည်သေနတ်များကိုင်ဆောင်ထားကြပြီး အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေးစာတန်းများ၊ ရုပ်ပုံများရေးဆွဲထားသောတီ-ရှပ်အကျီများ ဝတ်ဆင်လျက် အော်ဟစ်ဆူပူခဲ့ကြသည့်အဖြစ်မျိုး ပြီးခဲ့သည့်လအနည်းငယ်ကပရောဖက်ဆာခန်ကြုံခဲ့ရသည်။အစ္စလာမ်မုန်းဝါဒသည် စူးစူးနစ်နစ်အမြစ်တွယ်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူအများအပြား၏ ဆူပူမှုမြင်ကွင်းဖြင့်ပရောဖက်ဆာခန်သိခဲ့ရသည်။ဆန္ဒပြသူများ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အမေရိကန်မွတ်စလင်များ၏ သန့်ရှင်းရာနေ့၌ထိုမွတ်စလင်များအားခြိမ်း ခြောက်ခြင်းဖြင့်လွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ပြောဆိုခွင့်ကို(ဆက်လက်တည်တံ့ရန်)ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
-မိမိတို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်များမှာမိုက်မဲသောလုပ်ရပ်များဖြစ်သော်ငြားလည်း ယင်းသည်လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုများကိုဦးဆောင်လှုပ်ရှားရေးအဖွဲ့ကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြကြသည်။
-ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခြင်း၏ရလဒ်အနေဖြင့်ဆိုင်ကယ်သမားများနှင့်မွတ်စလင်များ အကြား မည်သို့သောပဋိပက္ခမှဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘဲထိုနေ့တွင်ငြိမ်းချမ်းရေး သို့ဦးတည်သောပမာဏအနေဖြင့်အနည်းအကျဉ်းမျှသာရှိသည့်တိုးတက်မှုအချို့ဖြစ်ထွန်းခဲ့သည်။
-ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုကအမေရိကန်သားများသည်မွတ်စလင်များနှင့်ပိုမိုစိမ်း ကားသွားစေခဲ့ပြီး အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် နဂိုကထက် ပိုမိုဝေးကွာသွားစေခဲ့သည်။
-''Phoenix မှာဖြစ်ခဲ့တာကအမေရိကန်မှာဖြစ်လာတော့မယ့်ကံမကောင်း အကြောင်းမလှမှုရဲ့ရှေ့ပြေးရောဂါနိမိတ်ဖြစ်တယ်။ဘာသာတရား၊ လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအကြား ပိုမိုတင်းမာလာတယ်။ဘာသာတရားဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးစိုက်ထူဖို့အတွက် မဟုတ်ဘဲပဋိပက္ခဖြစ်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ဖိအားတစ်ခုဖြစ်နေသလား၊ ဖြစ်မနေဘူးလား၊ ဘာသာတရားဟာ လွတ်လပ်ခွင့်၊ လူ့အခွင့်အရေးတို့အတွက်အတားအဆီးဖြစ်နေသလား၊ ဖြစ်မနေဘူးလား ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုပေါက်ဖွားလာစေခဲ့တယ်။လွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ပြောဆိုခွင့်၊ လိင်တူလက်ထပ်ထိမ်းမြားခွင့်နှင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခွင့် အစရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘာသာတရား၊ လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလတ်တလောအလွန်အကဲဆတ်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေရဲ့တင်းမာလာနေမှုကိုအခြားကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးတွေကလျှော့ချ(ဖြေလျော့)ပေးစွမ်း နိုင်မှုမရှိတဲ့အခါအမေရိကန်မှာအစ္စလာမ်ကတိုက်ခိုက်အခံရဆုံး(ဖိအားအပေး အခံရဆုံး)အဖြစ်နှင့်ပေါ်လွင်လာခဲ့တယ်။'' ဟု ပရောဖက်ဆာခန်ကဆိုသည်။
-ကျွန်ုပ်တို့သည်အစ္စလာမ်ကြောက်ရောဂါ(Islamphobia)ပျံ့နှံ့ခံစားနေရသောလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်နေထိုင်နေရပြီး အစ္စလာမ်နှင့်မွတ်စလင်ကိုကြောက်ခြင်းသည်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။Pew polls ၏ အဆိုအရအစ္စလာမ်၊ မွတ်စလင်နှင့်ပတ်သက်လျှင်အပျက်သဘောအမြင်ကိုအမေရိကန်သားများကလက်ကိုင်ပြုထားကြသည်။တဆက်တည်းမှာပင်အမေရိကန်အများစုသည်မွတ်စလင်တစ်ဦးတစ်လေမျှနှင့်ပင်ဆုံတွေ့ဖူးခြင်းမရှိချေ။အမေရိကန်မွတ်စလင်များသည်မိမိတို့အား အပျက်သဘောမြင်နေသောအမြင်ကိုချေဖျက်ရန်နေ့စဉ်နှင့်အမျှတောင်တက်သမားများကဲ့သို့ပင်ပန်းခက်ခဲစွာရင်ဆိုင်နေရကြရ၏။ဆိုင်ကယ်သမားများ ဗလီဝတ်ကျောင်းအပြင်ဘက်တွင် စုရုံးဆန္ဒပြခဲ့သော Phoenix တွင်ကြုံတွေ့ခဲ့သည့်အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ရေး အခြေအနေမျိုးကိုအမေရိကန်တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနှင့် ယခုမြင်နေရပြီဖြစ်သည်။
-ပြီးခဲ့သည့်လကပင်မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး အုပ်စု၂ဝမျှကို အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် အဝှန်းတွင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီဖြစ်သည်။
-ဘာသာတရား၊လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုသောအကြောင်းကိုနိုင်ငံအဝှန်းတွင် အမှန်တကယ်အလင်းဆောင်ပေးနိုင်ရန် ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဤနေရာတွင် လာရောက်စုရုံးကြခြင်းဖြစ်သည်။တကယ်တော့ဘာသာတရား၊ လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးတို့အကြား ဖြစ်ပေါ်နေသောတင်းမာမှုကိုမည်သို့လျှော့ချပေးနိုင်မည်နည်းဆိုသည့်အဓိကကျသောအချက်ကိုရှေ့တွင်ဖြစ်ခဲ့သောအဖြစ်အပျက်များကသင်ခန်းစာပေးလျက်ရှိသည်။ဘာသာတရားအချင်း ချင်း အပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိရန်၊ ဘာသာဝင်များအချင်းချင်းညီရင်းအစ်ကို၊ မောင်ရင်းနှမကဲ့သို့အပြန်အလှန်နားလည်ကြရန်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတိုးမြှင့်တည်ဆောက်ရန် ယနေ့ကျွန်တော်တို့နယူးယောက်မြို့၏ ဤနေရာတွင် စုရုံးနေကြခြင်းဖြစ်သည်။
''ဖြေရန်အရေးကြီးလိုအပ်တဲ့ကျစ်လစ်မာကျောအကဲဆတ်သောမေးခွန်းအချို့ရှိပါတယ်။Phoenix ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူဆိုင်ကယ်သမားများ ခုရှိသေးသလား။အစ္စလာမ်ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဆန့်ကျင်တဲ့သာသနာလား။ လွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ပြောဆိုခွင့်ကိုအစ္စလာမ်ကတားမြစ်ဆန့်ကျင်သလား။ ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။'' ဟု ပရောဖက်ဆာခန်ကဆိုသည်။
-အမေရိကန်အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်း၏ ဒု-ဥက္ကဌနှင့်သာသနာပြုမှုးဖြစ်သ ူAzharHaneef က ပရောဖက်ဆာခန်၏ ပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံလျက်ဖြည့်ဆွက်ပြောကြားသည်မှာ-
''ဘာသာတရားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခြေခံပြီး ယနေ့ညချမ်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစုရုံးကြရခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုခဲ့ပြီးသလိုပဲပုပ်ရဟန်းမင်း ဖရန်စစ်ကများမကြာမီကကျွန်တော်တို့(အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့)ဆီကြွလာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ မှတ်သားစရားအချက်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်(ပုပ်ဖရန်စစ်)ကို ရိုသေလေးစားစွာဖြင့် မေတ္တာရှေ့ထားပြီးဆက်ဆံကြိုဆိုခဲ့တယ်ဆိုတာအားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ လူသားထုတစ်ရပ်လုံးကိုမေတ္တာထားကြောင်း ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာ ယနေ့ကမ္ဘာရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနှင့်ပတ်သက်ပြီး အလွန်အမင်း စိုးရိမ်ပူပန်နေရတယ်ဆိုတာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသိပြီးဖြစ်တယ်။ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာဟာ အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပဋိပက္ခတွေတိုးပွားရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်လို့နေပြီး ထာဝရဘုရားသခင်နှင့်ဘာသာတရားကိုခုတုံးလုပ်ကာရက်စက်မှုတွေကျူးလွန်ရာနေရာဌာနေဖြစ်နေတယ်။မည်သည့်ဘာသာတရားကမှအဓမ္မစနစ်နဲ့အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်မှုကိုသွန်သင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သာကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပါတယ်။
'ကျုပ်ရဲ့ယုံကြည်မှုကကွဲပြားတယ်။ သူပြောတာကိုကျုပ်သမိုင်းကမထောက်ခံဘူး' လို့ဆိုသူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှမရှိဘူး။'
အဲလိုပြောတာဟာ နိုင်ငံရေးပါ။ဘာသာရေးမဟုတ်ပါဘူး။'' ဟု ပုပ်ရဟန်း မင်းကကျွန်တော်တို့ညီလာခံကြွရောက်လာစဉ်ကမိန့်ကြားဖူးပါတယ်။
-အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင်လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်များစွာကဖြစ်ခဲ့သည်များနှင့် ယခုဖြစ်နေသည်များအကြားကမည်သို့ကွာခြားသနည်း။ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲသို့ဘာသာတရားရောက်လာသည့်အခါကွာခြားသွားခြင်းမရှိကြောင်း တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ကောင်းမှုနှင့်မကောင်းမှု၊ သူတို့နှင့်ငါတို့၊ ဟိုလူနှင့်သည်လူစသည်များနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်တော်ပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။
သခင်ယေရှု၊ တိဘက်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ။ ကျွန်ုပ်တို့ လိုက်နေသည့်လမ်း ? အပိုင်း (၁)
သခင်ယေရှု၊ တိဘက်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ။ ကျွန်ုပ်တို့ လိုက်နေသည့်လမ်း ? အပိုင်း (၁) အကြောင်းအရာက အလွန်မှရှည်လျားတာကြောင့် အပိုင်း နှစ်ခု သ...